Offshore Banking Myths uye Misnomers Vakarongedzwa
Offshore Banking Ngano
Offshore banking inouya neyakaipirwa. Saka, vazhinji vemabhizimusi uye bhizinesi nyanzvi havanzwisisi. Vamwe vanokara pane kungo taura kuti vanogona kuchengetedza mari yavo zvakachengeteka muaccount yekubhengi account. Mifananidzo yemabhoti anomhanya, anodhura, zvinodhaka kingpins, uye chena masutu anouya pakarepo mundangariro. Uyezve, kuwanda kwemafirimu akashata emuHollywood, terevhizheni, uye kuratidzwa kwakashata mumapepanhau hakuna kushandura mafungiro aya. Ivo vaisakwanisa kuve mberi kubva pachokwadi.
Mashandisiro Atinoita Vantu Mashoma Offshore Banking
Chokwadi chiripo ichi. Offshore yezvemari nzvimbo (OFC) kana mabhangi, inozivikanwawo semutero nzvimbo, inowanikwa zvakanyanya nekuda kwezvikonzero zvishoma. Vanogona kubatsira kupa asset kuchengetedzwa, kukura kwezvinhu, uye kuderedzwa kwemutero - zvinoenderana nekutonga kwako. Isu tinoziva masosi akadai kuti atambire vanhu vekunze nemakambani, makuru uye madiki, kutenderera pasirese.
Offshore bank account hashandi uye nzvimbo dzemari dzinogona kuburitsa real world mhinduro kune dzakawanda zvezvinhu zvinotarisana nevanhu nhasi. Inogona kubatsira avo vanotsvaga kuchengetedzwa kwemidziyo kubva kumatare edzimhosva. Iyo zvakare senzira yekuderedza iyo kurongeka kwehurumende yenzvimbo isina kugadzikana.
Kutaura chokwadi, zviri nani kusanganisa akaundi yekumhiri kwebhangi pamwe neasset protection trust. Nemusanganiswa uyu, unogona kupa asset dziviriro kubva kune zvakajairika njodzi. Njodzi dzakadai dzinosanganisira kurambana, mamiriro asina kunaka emusika, kana kuwacha. Idzi njodzi dzinowanzoitika munyika dzekuMadokero.
Offshore Bank Accounts: Kuparadzana Kwemari, uye Mamwe Mhosva Dzemabasa
Mabhangi pasi rese ane chinangwa chimwe chikuru pavanovhura maakaundi evatorwa. Ndokunge, chengeta ivo vakanaka mukati uye chengetedza vakaipa kunze. Bhanga rinogona kurasikirwa rezinesi raro kana richitaridzika neimwe nzira pavanofungidzira nezvekuita. Inogonawo kurasikirwa neaya mukana wekuisa waya emadhora emadhora ekuAmerica kana maEuro, zvakanyanya kuisa kunze kwebhizinesi. Nekudaro, ziva kuti, paunovhura account, bhangi haringakurege uchitsvedza pakupa zvitupa zvako. Vari kuenda kunoda kuona chaiko magwaro emari magwaro. Uyezve ivo vachada humbowo hwekuti mari idzi dzaibve pamutemo. Mari yekuwana uye yekuchengetedza rezinesi rebhangi yakakura. Nekudaro, mabhangi haazoregi iwe utore mapfupi. Kana zvasvika pakuwana iyo inofanirwa nekushingairira bhanga rinoongorora zvese mabhokisi usati wavhura account yako.
Zvinogona kunge zvisiri izvo kutaura kuti hapana mari isiri pamutemo inowana muaccount yekubhangi. Asi sezvatichaona munguva pfupi, izvi hazvisi kunyatsotaura zvakawanda. Muchokwadi, ngatitarisei kune ayo masimba kuti mugadziri wepakati angangofungidzira kuve nemhosva. Izvo zvinonzi "zvakachengeteka" nzvimbo zvine zviitiko zvisiri pamutemo zvebhangi kupfuura izvo zvinonzi "nzvimbo dzemitero" zvine. Iyo huru "yetsika" kutonga yakashanduka kuve huru yekubira mari uye matsotsi emabhizinesi-ekutsigira nzvimbo munyika. Uye United States ndiyo huru pakati pavo. IUS inotumira hafu inofungidzirwa yehafu yese yemari yakashambadzirwa mupasi rakashambidzwa mukati memahofisi ayo e50. Iyi hafu inoshandura kune yefungidziro yefungidziro ye $ 300 bhiriyoni US.
Ehezve, United States haisi iyo chete inobhadhara mutero, kana "yakakura" simba rinoenderana nebasa iri. Dzimwe nyika dzakaita seUK uye Germany dzinogovana mutsauko uyu. Vanhu veU.S. mutero pamari yepasi rose. Nekudaro, kufambisa mari kuenda kumahombekombe musarudzo dzemutemo dzakakodzera dzakawanda dzinopa rubatsiro pazvinhu zvekuchengetedza. Nekudaro, hazvisi zvakajairika kushanda pakudzora mutero. Kuve iwo mutero kujekesa ndicho chinhu chitsva chaicho, mutero kunzvenga kushandisa zvivakwa zvekunze hakuna kuchenjera kana kushanda zvakanaka.
Kufunga kwenhema ndekwekuti nzvimbo yemutero / yekumahombekombe kubhengi ndiyo nzvimbo yakakodzera yekubhadhara mari yemutsotsi. Icho chokwadi, zvakadaro, ndechekuti masimba makuru-mutero anogara yakawanda yemari iyi. Nzvimbo-yemitero yakaderera inomiririra chikamu chidiki zvakanyanya pazere.
Idzi mhando dzechokwadi, chokwadika, hazviwanzo kuwanzo kutaurwa munhau dzeTV uye purinda midhiya. Vatongi vanobatanidzwa vanonyara chaizvo neuipi pfungwa dzinokatyamadza.
Saka, sezvatiri kuona, kune dzakawanda ngano dzakapoteredzwa nemahombekombe ekune dzimwe nyika. Kana isu tikanyepedzera mukati, zvisinei, tinoona kuti kumahombekombe ekubhangi kunogadziriswa zvakanyanya. Mabhangi anogona kurasikirwa marezinesi avo kana kutambura zvakaoma faindi yekutora zvisina kujairika vatengi. Regulators vanogara vachiongorora mabhengi kune avo anoziva-ako-mutengi marekodhi. Kana bhengi bvunzo rikamufungidzira mumwe munhu anoshandisa account yavo yepasi rese nekuda kwezvinangwa zvisiri zvechokwadi, havazowana account yakavhurwa. Kana ikashandiswa nenzira iyi mushure mekuvhurwa kweakaunti, ivo vachakurumidza kubviswa kubhangi.
Bhengi rinochengeta rezinesi raro zvinoenderana navo vachitevedzera zvemuno nenzvimbo dzenyika. Uyezve, ivo vanofanirwa kutevedzera masimba akasimba emari. Naizvozvo, mabhanga anotenderera pasirese anoshanda nesimba kutevedzera mutemo. Vanoedza nepavanogona napo kuchengetedza vakomana vakanaka vapinda uye vakaipa kunze. Kugara kwavo zvakanaka mune zvemari kunoenderana nazvo.
To chitsauko 5>